Sky-filter Photo Filter-out Warshada Software iyo soo saarayaasha | Roobab
Liiska soo celinta
Marka aan qorsheyno jidka duulimaadka ee hawsha sawir-qaadista ee oblique , si loo ururiyo macluumaadka texture ee dhismaha ee cidhifka aagga bartilmaameedka, sida caadiga ah waa lagama maarmaan in la ballaariyo aagga duulimaadka.
Laakiin tani waxay dhalin doontaa sawirro badan oo aan u baahnayn gabi ahaanba, sababtoo ah aagagga duulimaadyada dheer, waxaa jira hal keliya oo ka mid ah xogta shanta lens ee ku wajahan aagga sahanka waa sax.
Tiro badan oo sawiro ah oo aan sax ahayn waxay keeni doontaa korodhka qadarka ugu dambeeya ee xogta, taas oo si dhab ah u yareeyn doonta waxtarka habaynta xogta, sidoo kale waxay sababi kartaa khaladaad xisaabinta saddex-geesoodka hawada (AT).
Software-ka sky-filter wuxuu si wax ku ool ah u dhimi karaa sawirada aan saxda ahayn 20% ~ 40%, hoos u dhigista tirada guud ee sawirada qiyaastii 30% iyo hagaajinta waxtarka habaynta xogta in ka badan 50%.
Bartilmaameedka Sky ee Meelaynta Markaa...
Dib u noqo